Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Caannimada dabaasha Bulgaariya waxay indhaha ku hayaan Seychelles loolanka soo socda ee dabaasha
Caannimada dabaasha Bulgaariya waxay indhaha ku hayaan Seychelles loolanka soo socda ee dabaasha
Waxay caan ku tahay biyaheeda quruxda badan, Seychelles waxay mar kale soo jiidan doontaa xiisaha caalamiga ah ee muuqaalka biyaha furan iyada oo caan ka ah dabaasha Bulgariya Tsanko Tsankov uu muujinayo xiisaha uu u qabo in la helo cinwaanka cayaartooygii ugu horreeyay ee caalami ah ee ku dabaasha jasiiradda weyn ee Mahé iyo jasiiradda hoose La Digue.
Tsankov waa horyaal badan oo heer qaran ah oo heysta rikoodh, iyo waxyaabo kale oo badan oo adduunka dabaasha ah.
Seychelles waxay martigelin doontaa Fédération Internationale de Natation's (FINA) Taxanaha Biyaha Caalamiga ah ee Bisha Oktoobar.
Dabaashaan xiisaha badan waxay isugeyn doontaa isboortiga, dhaqanka, iyo dalxiiska hal dhacdo oo xiiso leh.
Seychelles, oo ah dalkii ugu horeeyey ee martigaliya Fédération Internationale de Natation (FINA) ee World Water Open ee gobolka Afrika, ayaa la eegay inay martigeliso dhacdadan quruxda badan ee biyaha furan oo la qorsheeyey inay dhacdo Oktoobar 2021.
Tsanko Tsankov waa horyaallo qaran oo badan oo rikoodh haysta, laba jeerna FINA World Master Vice-champion 200 m medley medley iyo 400 m freestyle iyo Master of Sports.
Munaasabadan ayaa ujeedkeedu noqon doonaa sidii la isugu keeni lahaa isboortiga iyo dhaqanka iyadoo la kordhinayo muuqaalka halka loo socdo.